Kaniisad lacag u aruurinaysa dhismaha Masaajid | Somaliska
Kaniisad lacag u aruurinaysa dhismaha Masaajid
Kaniisada Svenska kyrkan i Nacka ayaa go’aan ku gaadhay in ay ka qeyb qaadato ololaha lacag loogu ururinayo masaajid cusub oo laga dhisayo xaafada Nacka ee Stockholm. Maamulka kaniisada ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka qeyb qaataan dhamaystirka mashruuca loogu magacdaray “guriga ilaahay”.
Sanadii 2012 ayaa Muslimiinta laga iibiyay dhul lacagtiisa gaarayso 300,000 kr taasoo ay balantu ahayd in ay lacagta bixiyaan kama dambaysa bisha December ee sanadka 2014 balse Muslimiinta ayaa u muuqda kuwo aan ku guuleysan in ay soo ururiyaan lacagta loo baahanyahay in lagu iibsado dhulka isla markaana lagu bilaabo dhismaha Masaajidka.
Arintaan ayaa dood ka dhex abuurtay Kiristaanka, iyadoo hada mid ka mid ah xubnaha maamulka kaniisada uu dacwad u ka gudbiyay arintaan. Ninkaan oo lagu magacaabo Anders Lundberg ayaa ku doodaya in Islaamka iyo Kiristaanku ay yihiin diimo kala duwan isla markaana aysan sax ahayn in lagu caawiyo Muslimiinta in ay dhistaan masaajid. Qaasatan waxa uu sheegay in Muslimiintu ay diidanyihiin Illaah nimada Nabi Ciise (nnkh).
Si kastaba ha ahaatee, Dhismaha Masaajidkaan ayaa dood dhaliyay markii lagu dhawaaqay sanadkii 2010, maadaama la sheegay in kaniisada iyo Masjidka isku goob laga dhisayo oo Muslimiinta iyo Kiristaanku isku goob ku tukanayaan. Qorshahaas in wax laga badalay iyo in kale ayaan hada cadayn maadaama Muslimiintu ay heshiis ku galeen in ay dhul iibsadaan.
Baahida keentay in Muslimiintu ay lacag taageero ka helaan kaniisada ayaa muujinaysa isku xirnaan la’aanta ka dhex jirta Muslimiinta iyo in aysan awoodin in ay ka qeyb qaataan dhamaystirka ama dhismaha Masjidka.
war ninyohow nacnacdaan intaa naga deyso singleka iyo 2sanno maxaa akhbaar ka aheysaa aniga dadba war aan jirin ha noo soo alifine sxb haddaa somali u shaqeyneyso waxaa la rabbaa inaa d raadisho arimaha somaliya sidda singleka ama 2sanno waa inaa arintaa warka keentaa waa inaa loyrada wareysataa ma sidaan ayaa saxafi ku tahey safinimo sidaan maha sxb waa inaan simminaar ku saabsan saxaafada ku siiyaa webka kale waxay soo qoraan ayaa qasheysaa xaaraam waxaan lama ogola inaad web kale koobi ka soo qaadato oo hadannaa aadan cadeyn webka aad ka soo qaadatey haddii web aad war ka soo qaadaneyso waa inaa hoos ku qortaa wxaaan ka soo xigtey web hebel sxb adigu saxaafada ku shaqey migrationka tag su aalo ka weydii arimaha somaliya loyarada tag su aalo ka weydii arimaha somalida sxb ma websate u shaqeeyo somalida ayaan furnaa mise qorshaha wax ayaad ka bedeleysaa wax iska bedel bro sidaan shaqo saxaafadeed maahe waxaana isku deydaa inaad ummada qanciso wararka ay tabayaan inaa soo baarto xog diidmo iyo ogolaansho ahba adba kii aad soo hesho aad u soo gudbiso
Single horta dhowr arimood ayaad isku dhex wadaa.
1. Horta in aad hawl saxaafadeed ii dirsato iyo in aad i dhahdo saxafi ma tihid isma waafaqayso.
2. Websiteka bishii 30.000 qof ayaa aqrisata dhamaantood waxay doonayaan in ay akhristayaan macluumad kala duwan oo boggu uma furna arimaha singleka iyo 2 sano oo keliya. Marka akhristayaasha kale i aad xushmad u muujiso waa muhiim. oo meelkasta aan lagu soo celcelin mowduuca singleka iyo 2sano.
3. Anigu kama jiifo arintaan ee waxaa ka jiiftay dowlada Sweden iyo guud ahaan Soomaalida. War aan jirin meel laga keeno ma jidho.
4. Anigu war ma soo koobiyeeyo ee mowduucyada aan qoro waa kuwo anigu aan qoray balse ilaha wararku ay kala duwanyihiin.
5. ugu dambeyntii in la sameeyo baaritaano, interview iwm waxay u baahantahay qarash, dhaqaalahaas kama soo baxo bogga. Marka dhaliilaha waxtarka ah waan soo dhaweynayaa balse waxaa muhiim ah in xaqiiqada la fahmo.
Insha Allah waxaan qorshaynayaa in aan kordhiyo hawsha bogga isbuucyada soo socda.
Fikrad lala dhacay 12 5
Abdirahman Idiris says:
Walaalkeen Jimcaale! Waad ku mahadsantahay warbixintaan iyo kuwa kale ee bulshada waxtarka u ah ee aad noo soo gudbisid ee bulshada soomaaliyeed ee reer Iswiidhan anfacaya ayna kala socdaan arrimo badan oo gaar ahaan soo galootiga dalka ku cusub iyo kuwa aan wali si fiican ola qabsan waxtar badabn u leh!
In kirishtaanku lacagta dhismaha Masjidka taageero bani aadnimo ka gaystaan wax ku jaban maleh, islaamka iyo Diimaha Samaawiga ah(Yuhuuda&Kirishtaanka) waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo facweyn asal ahaana waxay ka simanyihiin Towxiidka/Kalinimada Alle, markii ay Yuhuuda iyo Kirishtaanku badaleen Kitaabkii Towreed ee Nabi Muuse (C.S.) iyo Kitaabkii Nabi Ciise (C.S) ayay ka leexdeen Towxiidka ama in ilaahay Subxaanawu watacaalaa kaligii Ilaahnimada loo qiro!
cajiib aduunyo nin joogooww maxaa aragti kuulaaban masjid baytulaahi maxaa sooo galshay masiixi kirishtan
yaab ka yaab kiisa wax qalbiga uroon maahin iyo negallhu akbar alaahu akbar alaaahu akbar aloow meel kalle nagasii
walla mashalaha lakin ninka dhahyo kirshatn didita islam ka ma qabto wayo iinu arko narx resta didta islmaka walo bahn yah ay so dhax galan islamka maraka lama fogeyo galo siidi diita uu uuqato islamka naxresta badan somalida seef labod ma wangsan dalkena wa uujeda dhibata ka tagan malin wlabom maskin wax galab san la diala nin islam marak somali ciilamga siifican uu faham islam tarqidis baratay wa didita naxrsio so dheawo wa didi islamka naaxris badan hadbo galdi mako dagnye scalam wxuu sinay jira sadoqo wax uugu wacan wa laso jida galda sidu didita uu qato iaslmaka wixi dabi an galany alaha naga cafiyo islamka guul ishalahhaa
single bro waa runtaaa jimcaale halmar isku day inaa xog rasmi ah ka keento dadka singalka sxb sare
ok jimcaale bro waa kaa qancey iga raali noqo boqolkiiba boqol waxaan hadda somali nahey anagaa hurudno oo aan dhibkeena muujin dowlada sweden waxay kaceysaa marka somali isku duubnaato oo mudaharaadyo isdabo joog ah sameyso markaas wax ayaa naloo ogolaanayaa lkn haddaa sidaan u jiifno waxba fadhi kuma imaanayaan
April 17, 2014 at 01:35
broor jimcaale lacag wa diyaar meqa kugu filan anaga bixineyno si ad wareysi uso sameyso adiga so sheg mel lagala xariro